Impawu zokuqala zokuphelelwa kwegazi, ukukhathala, ukunyamala emehlweni, ubuso obuso. Esi sisifo esifanelekileyo kwi-90% yamatyala kwenzeka ngenxa yokungabi ncitshi emzimbeni. Nangona kunjalo, nayiphi na isizathu sokukhulelwa kwegazi, ukutya okukhethiweyo ngokufanelekileyo kubalulekile.
Unyango lwe-anemia ye-anemia kunye neziyobisi ayinakucinywa, kwaye kunye nokutya okunempilo, kuya kubuyiselwa umzimba ngokukhawuleza.
Ukutya okunokubuyisela ukutya, yenza ukutya okucebileyo kungekhona nje kwisinyithi kunye nosawoti, kubalulekile ukunyusa umzimba kunye nezinye izinto ezibalulekileyo, izinto kunye namavithamini.
Xa ukhetha ukutya okufanelekileyo, qhagamshelana nogqirha wakho. Oku kubaluleke kakhulu ukuba unezinye izifo.
Okokuqala, ekudleni kwesigulane esinenkcenkceshe ye-anemia, kuyimfuneko ukwandisa inani leenkomo. Oku kungenxa yokuba insimbi efunekayo emzimbeni womntu iyona nto ifanelwe kwisimo se-heme. Leli ligazi eliqulethwe kwiimfucu ze-muscle.
Qiniseka ukuba udle isibindi sesilwanyana esingapheliyo, iidiliya ezibomvu, izikhupha zeqanda, i-dog rose, iklabishi yaselwandle, i-sea buckthorn. Kule mveliso, ngaphezu kwensimbi iqukethe i-vitamin B12. Ukungabi nalesi sivithamini kubangelwa uhlobo oluthile lwe-anemia.
Ukufumana umgangatho wesinyithi ngomzimba, qinisekisa ukuba inani elaneleyo levithamini C kunye nobhedu linikwa ukutya. Imveliso equkethe ubhedu: i-cherry, i-apricots, amakhiwane omisiwe, imifuno eluhlaza. Unconywe kakhulu ulwandle olutyunxwemeni, olwandle olwandle.
Kusuka kwiiyolimo, ukhethe okukhethwa kukho kwi-buckwheat. Kubaluleke kakhulu kunyango lwe-anemia ye-iron. Kukulungele ukuphinda ubusuku ebusuku kwi-thermos uze udle ekuseni, ungeze ioli kunye nemifuno. Kwakhona zibandakanya kwi-bran yokutya. Ukutya okutya okutya okuthe tye kukulungele ukutya okunjalo, kodwa ezi mveliso ziqulethe ii-phytates - izinto eziphazamisa ukutsalwa kwesinyithi. Ngoko ke, zama ukuzondla ngokwahlukileyo kwizinto zokutya zeprotheni.
I-Tannin, equle itiye, ikhofi, i-cocoa kunye neziphuzo eziqukethe i-cola, iphinda ikhuphe isinyithi ngokugaya ngokupheleleyo. Sebenzisa endaweni yazo, iziphuzo zeziqhamo, i-compotes, i-teas teas, i-jelly, i-juices.
Ukutya okuchanekileyo nokusebenzayo kwe-anemia yokunqongophala kwesinyithi kuya kuba luncedo ngakumbi xa ukongeza iimveliso zokhuseleko lwezofu. Okanye, u-honey, pollen kunye ne-perg. Inyosi ifuna iintlobo ezimnyama: ihlathi, ihlathi, intaba. Yidla kwi-100 grams imihla ngemihla (iifuni ezintathu). I-pollen ne-pergum ivuselela i-hemopoiesis ngokugqibeleleyo, thabatha iipaspuni ezi-2-5 imihla ngemihla, kuxhomekeka kwimeko yesigulane.
Ehlobo, hlawula ngakumbi imifuno, izithelo, iitrob, amajikijolo. I-Strawberries, i-blueberries, iidiliya, i-viburnum, i-buckthorn yolwandle, i-strawberry, i-blackberries, kunye ne-vitamin C-i-currant emnyama, i-rose currant kunye ne-cranberries idlala indima ebonakalayo ekwenzeni unyango lwe-anemia, kunye namaapula "antonovka", amapheya, iiperesi nama-apricot.
Namathela kwimigaqo yokupheka eyiyo. Nciphise ixabiso lemveliso ngamanzi abilayo kwaye upheke ngaphantsi kwesimbozo esivinyiweyo. Ngaloo ndlela, unika isandla ekulondolozeni umlinganiselo omkhulu wezondlo kunye namavithamini. Imifuno kunye nemifino yinqunyiwe ngqo phambi kokusetyenziswa. Izitya zilungele ukudliwa ngokutsha, ungazigcinanga ixesha elide.
Ncitshitshisa okanye niphume ngokupheleleyo kwimveliso yokutya eye yafumana ukusetyenziswa kwezinto ezininzi, iimveliso ezicokisekileyo kunye neemveliso ezigqityiweyo. Ngokuqhelekileyo ayinalo izixhobo ezifanelekileyo.
Sebenzisa i-seasonings, njengoko ivuselela i-juiciness esiswini. Oku kukukhuthaza ukugonya okungcono kunye nokufana nokutya.
IiVithamini neepropati zebharley
Isaladi yePasta kunye netamatati, i-zucchini kunye ne-feta cheese
I-Pekinese isaladi yeklabishi kunye neekrotithi zaseKorea
I-Fly-Lady - ukucoca umfazi wamanje